Siyaasadda Khaaska ah | Shuruudaha & Xaaladaha | Hababka Lacagta Siyaasadda Soo Celinta
Macluumaadka la soo ururiyay www.itstechschool.com ama www.itstraining.in waxaa loo hayaa si qarsoodi ah oo aanan u gudbin ururada saddexaad ee suuq-geynta suuq-geynta ama waxqabadyada xayeysiinta.
Haddii aad codsato ama waydiiso adeegyadayada ama koorasyada kumbuyuutarkeena annaga oo raadinaya macluumaadka haddii aad la wadaagto cinwaankaaga emailkaa markaas waxaad heli kartaa emayl marmar ah oo la xidhiidha adeegyada aanu bixino. Haddii aadan rabin inaad hesho waraaqaha e-mailka ah fadlan noogu soo sheeg info@itstechschool.com oo ma heli doontid emails mustaqbalka.
Solutions Technologies Innovative ayaa magacaabay Wakiilada iibka si ay u bixiyaan macluumaad iyo aragtidooda si ay u weydiiyaan. Markaad weydiisato ITS, jawaabteena waxaa lagu daabici doonaa Wakiilada degaankaaga waxaadna ka heli kartaa emails iyaga oo bixinaya macluumaad dheeraad ah.
Sababtoo ah suuq-geynta iyo waraaqaha xayeysiisyada badan ee boosteejada boostada isticmaalaan sifooyinka spam, waxaa suurtagal ah in e-maylkeenu mar walba kugula kulmin. Si loo hubiyo in waxweydiintayadu aysan aheyn kuwa aan la joogin, waxaanu u dirnaa email soo-celin ah (adoo isticmaalaya cinwaanka emailka ah ee kale admin@itsgroup.in in case we do not receive a read report or a reply to our email.
Solutions Technologies Innovative waxay isticmaashaa cookies, pixel tracking iyo tiknoolajiyada la xidhiidha. Waxaan u isticmaali karnaa nuqulo nagu soo tuura annaga ama seddexaad dhinacyada ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay ku shaqeeyaan oo shakhsiyadeeyaan bogga internetka. Sidoo kale, cookies ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si loo dabagalo sida aad u isticmaasho goobta si ay bartilmaameed xayeysiis ah oo ku saabsan on bogagga kale.
Dhammaan faahfaahinta kaararka deynta / debit iyo macluumaadka shakhsiyadeed ee lagu aqoonsan karo LAGUMAyoonin, la iibin, la wadaago, la kireeyo ama loo kireysto cid kasta oo saddexaad.
Siyaasadaha Website-ka iyo Shuruudaha iyo Shuruudaha waa la bedeli karaa ama marmar la cusbooneysiin karaa si loo daboolo shuruudaha iyo heerarka. Sidaa darteed Macaamiisha 'waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay si joogta ah u soo booqdaan qaybahaas si loo cusbooneysiiyo isbeddelada ku yimaada website-ka. Isbedelku wuxuu noqonayaa mid wax ku ool ah maalinta la soo dhajiyo.
Qaar ka mid ah xayaysiinta aad ku aragto Bogga waxaa lagu soo xulay oo ay bixiyaan dhinacyada sadexaad, sida shabakadaha isku-xirka, wakaaladaha xayeesiinta, xayaysiinta, iyo bixiyeyaasha qaybaha dhagaystayaasha. Qaybaha saddexaad waxay ururin karaan macluumaad ku saabsan adiga iyo hawlahaaga internetka, boggaga ama boggaga internetka, iyada oo la adeegsanayo cookies, shabakadaha websaydhka iyo tiknoolajiyada kale si aad u fahamto danahaaga oo ay kuugu soo bandhigto xayeysiisyo ku habboon danahaaga. Fadlan xusuuso inaanan heleynin, ama aan xakameyn karno, macluumaadka kuwan sadexaad ayaa laga yaabaa inay soo aruuriyaan. Dhaqanka xogta ee dhinacyadan saddexaad kuma jiraan siyaasaddan gaarka ah.
Khilaaf ama sheegasho kasta oo ka soo baxaya ama la xidhiidha shabakadan waa in lagu maamulaa oo lagu muujiyaa sida waafaqsan shuruucda INDIA
Hindiya waa waddankeena hooyo.
Haddii aad lacag u sameyso badeecadayada ama adeegyadayada boggayaga internetka, faahfaahinta lagaa codsaday inaad soo gudbiso waxaa si toos ah loogu siiyaa bixiyaha bixiyaha iyada oo loo marayo xiriir la hubo.
Kaararka waa inuu hayaa nuqulka diiwaanada waxqabadka iyo shuruucda iyo ganacsatada ganacsiga.
Waxaan aqbalnaa lacagaha internetka iyadoo la isticmaalayo kaarka Visa iyo MasterCard credit / debit ee USD, GBP, EUR, AED & INR.
Marka lacagaha diiwaangelinta la bixiyo waxaa jiri doona lacag celin.
Lacagaha Courseware laguma soo celin doono.
Soo celinta waxaa lagu sameyn doonaa oo kaliya iyada oo loo marayo Habka Aasaaska ee Bixinta.
Kharashka koorsada waa la soo celin karaa haddii aan helno jawaab celin ku saabsan saacadaha 4 ee tababarka.